Knowledge – Shwe Pyi Aye
By JohnSmithPosted on January 22, 2021 January 22, 2021
သီလရှင် အပါး (၃၀၀၀) နဲ့ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း (၄၀) ကို တစ်လ (၂) ခါ အလှူလုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးမိသားစု မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် ၁၀၀၀ တန်က အရွက် ၂၅၀၀ …၅၀၀၀ တန်ကအရွက် ၅၀၀ ..ပေါင်း အရွက်ရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရွက်လျှင် ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ် …အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူဒါန်းပါတယ်။ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူသူ ၁၈ ယောက်ခွဲလှူရင် ၁၀ မိနစ် မကြာဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ မလှူခင်မှာ အသက် ၆၀ အထက် ၅၀ ခန့်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်စီ အရင်လှူပါတယ်တဲ့ ယယယယ အများလှူတဲ့အခါမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ရမည် ၅၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၇၀၀၀ ရပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်…. အလှူက ဒါတင်မကပါဘူး ပြီးရင် ကျောင်းတိုက်ခွဲ ၄၀ ကို တစ်ကျောင်းလျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်စီ ထပ်လှူပါတယ်…. အရုဏ်ဆွမ်းအပါအဝင် တစ်ခါလှူရင် သိန်း 90 ကျပ် ….တစ်လကို နှစ်ကြိမ်လှူ တော့ သိန်း ၁၈၀ ကျပ် လှူတယ်လို့ သိရပါတယ်…တကယ့်ကို ရက်ရောတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပါပဲ။
သီလရှင် အပါး (၃၀၀၀) နဲ့ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း (၄၀) ကို တစ်လ (၂) ခါ အလှူလုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးမိသားစု မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် ၁၀၀၀ တန်က အရွက် ၂၅၀၀ …၅၀၀၀ တန်ကအရွက် ၅၀၀ ..ပေါင်း
အရွက်ရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရွက်လျှင် ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ် …အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူဒါန်းပါတယ်။ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူသူ ၁၈ ယောက်ခွဲလှူရင် ၁၀ မိနစ် မကြာဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ မလှူခင်မှာ အသက် ၆၀ အထက် ၅၀ ခန့်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်စီ အရင်လှူပါတယ်တဲ့ ယယယယ အများလှူတဲ့အခါမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ရမည် ၅၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၇၀၀၀ ရပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်…. အလှူက ဒါတင်မကပါဘူး
ပြီးရင် ကျောင်းတိုက်ခွဲ ၄၀ ကို တစ်ကျောင်းလျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်စီ ထပ်လှူပါတယ်…. အရုဏ်ဆွမ်းအပါအဝင် တစ်ခါလှူရင် သိန်း 90 ကျပ် ….တစ်လကို နှစ်ကြိမ်လှူ တော့ သိန်း ၁၈၀ ကျပ် လှူတယ်လို့ သိရပါတယ်…တကယ့်ကို ရက်ရောတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပါပဲ။
အသက် အငယ်ဆုံး အဘိဓမ္မာ မဟာဘွဲ့ရ ၁၅ နှစ်သားလေးမောင်ဟန်ထွန်းအောင် ဓမ္မရသနောက် တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်) အသက် ငယ်ဆုံး အဘိဓမ္မာ မဟာ ဘွဲ့ရ ၁၅နှစ်သား သူလိုလူ (၅၂) ကြိမ်မြောက် အ ဘိဓမ္မာ စာတော်ပြန်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ထဲမှာ ၁၅ နှစ်သား တစ်ဦးရဲ့ မဟာဘွဲ့ ရရှိမှုဟာ ဘယ်လိုမှချန်လှပ်ခဲ့လို့ မရနိုင်ပါဘူး။လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတွ က် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားတဲ့ ကျမ်းအစိတ် အပို င်း ၁၅ ပိုင်းကို မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ဟာ ဒီကနှစ်မှာ ရေးဖြေ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အတူ လှလှပပ အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။၁၅ ကျမ်းကို ၄ နှစ်အတွင်း ထူးချွန်စွာ ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့တာမို့ ကြား သိရသူတိုင်း အံ့သြ ဝမ်းသာကြမယ်လို့ ထင်ပါတ ယ်။တစ်ကယ်တော့ မောင်ဟန်ထွန်းအောင် ဟာ အသက် ၁၁နှစ် အရွယ် ကထည်းက အစိုးရအဘိဓမ္မာ ၃ ဆင့်လုံးကို အောင်မြင်ကာ အဘိဓမ္မာဥယျာဉ် ကြီးထဲကို စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မရသကို သိရှိခံစားဖူးတဲ့ ပျားပိတုန်း လေးတစ်ကောင် အဖို့ ဒီဥယျာဉ် ကြီးထဲကနေပြီး ပြန်မထွက် နိုင်တော့တာ သိပ်တော့လဲ မဆန်းလှပါဘူး။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဓမ္မသာကစ္ဆာ အဘိဓမ္မာ၃ ဆင့်လုံးကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ၁၂နှစ်အရွယ် ၇တန်းနှစ်မှာ အစိုးရ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ဆင့်နဲ့ ဓမ္မသာကစ္ဆာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ ဆင့်လုံးကို နှစ်ချ င်းပေါက် အံ့ဖွယ် အောင်မြင်ခဲ့သလို အဘိဓမ္မာစာတော်ပြန်ပွဲကိုလည်း စတင်ဝင်ရောက် ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။၁၃ နှစ်ရွယ် ၈ တန်းမှာ ပထမပြန် စာ မေးပွဲ အခြေပြု မူလတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အဘိဓမ္မာ ပြန့်ပွားရေး အသင်းကြီးရဲ့ (စူဠ အာဘိဓမ္မိက ဝိသိဋ္ဌ ကလျာဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို ရ ရှိခဲ့ပါတယ်။၁၄နှစ်အရွယ် နဝမတန်းမှာ အစိုးရအဘိဓမ္မာ ဂုဏ်ထူးဆောင် (ဋီကာကျော်) ၃ဆင့်ကို အောင်မြင်ကာ (မဇ္ဈိမ အာဘိဓမ္မိက ကလျာ ဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို ထပ်မံ ရရှိပြန်ပါတယ် တက္က သိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုရမဲ့ အခုနှစ်မှာလည်း လုံးဝရပ်နားခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက် ကြိုးစားပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက် (မဟာ အာဘိဓမ္မိက ဥက္ကဋ္ဌ ကလျာ ဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို အပြီးသတ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကျမ်းတွေဆိုတာ တစ်ကျမ်း တစ်ကျမ်းကိုပဲ အောင်မြင်အောင် မနည်းလေ့လာ ပူဇော်ရကြောင်း ပူဇော်ဖူးသူတိုင်း ကောင်းစွာ သိရှိကြပါတယ်။ဒီ၅နှစ်တွ င်းမှာ အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး) ၃ဆင့် အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ် ထူးဆောင်) ၃ဆင့်၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ဆင့်၊ အခြေပြုမူလတန်းနဲ့ စာတော်ပြန်ပွဲ ၁၅ကျမ်းတို့ကို ဖြေဆို အောင်မြင်ကာ (စူဠ အာဘိဓမ္မိက ကလျာဏဉာဏဓဇ) (မဇ္ဈိမ အာဘိဓမ္မိက ဝိသိဋ္ဌ ကလျာ ဏဉာဏဓဇ)၊ (မဟာ အာဘိဓမ္မိက ဥက္ကဌ က လျာဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကြီး ၃ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ သမိုင်းတလျောက် အသက်အငယ်ဆုံး စာပြန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါမို့ ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီလောက်လုပ်နိုင်တာကို အတော်ပဲ လက်ဖျားခါမိပါတယ်။ဒါမို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့… မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ကို ဓမ္မရသနောက် တစ်ကောက် ကောက် လိုက်ခဲ့သူ၊ ဆင်ခြေ ဆင်လက် တွေကို မထီမဲ့မြင် ပြုနိုင်တဲ့သူ အခက်ခဲတွေကို အခွင့်အရေး အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သူ၊ အားကျ အတုယူသင့်သူဂုဏ်ပြု ချီးကျူးမှုတွေနဲ့ အထူးကို ထိုက်တန်တဲ့ သူအဖြစ် နှစ်ဆန်း အမှတ်တရ ဝိသေသပြု မှတ် တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု လိုက်ရပါ တော့တယ်။
အသက် အငယ်ဆုံး အဘိဓမ္မာ မဟာဘွဲ့ရ ၁၅ နှစ်သားလေးမောင်ဟန်ထွန်းအောင် ဓမ္မရသနောက် တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်) အသက် ငယ်ဆုံး အဘိဓမ္မာ မဟာ ဘွဲ့ရ ၁၅နှစ်သား သူလိုလူ (၅၂) ကြိမ်မြောက် အ ဘိဓမ္မာ စာတော်ပြန်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ထဲမှာ ၁၅ နှစ်သား တစ်ဦးရဲ့ မဟာဘွဲ့ ရရှိမှုဟာ ဘယ်လိုမှချန်လှပ်ခဲ့လို့ မရနိုင်ပါဘူး။လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတွ က် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားတဲ့ ကျမ်းအစိတ် အပို င်း ၁၅ ပိုင်းကို မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ဟာ ဒီကနှစ်မှာ ရေးဖြေ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အတူ လှလှပပ အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။၁၅ ကျမ်းကို ၄ နှစ်အတွင်း ထူးချွန်စွာ ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့တာမို့ ကြား သိရသူတိုင်း အံ့သြ ဝမ်းသာကြမယ်လို့ ထင်ပါတ ယ်။တစ်ကယ်တော့ မောင်ဟန်ထွန်းအောင် ဟာ အသက် ၁၁နှစ် အရွယ် ကထည်းက အစိုးရအဘိဓမ္မာ ၃ ဆင့်လုံးကို အောင်မြင်ကာ အဘိဓမ္မာဥယျာဉ် ကြီးထဲကို စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မရသကို သိရှိခံစားဖူးတဲ့ ပျားပိတုန်း လေးတစ်ကောင် အဖို့ ဒီဥယျာဉ် ကြီးထဲကနေပြီး ပြန်မထွက် နိုင်တော့တာ သိပ်တော့လဲ မဆန်းလှပါဘူး။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဓမ္မသာကစ္ဆာ အဘိဓမ္မာ၃ ဆင့်လုံးကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ၁၂နှစ်အရွယ် ၇တန်းနှစ်မှာ အစိုးရ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ဆင့်နဲ့ ဓမ္မသာကစ္ဆာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ ဆင့်လုံးကို နှစ်ချ င်းပေါက် အံ့ဖွယ် အောင်မြင်ခဲ့သလို အဘိဓမ္မာစာတော်ပြန်ပွဲကိုလည်း စတင်ဝင်ရောက် ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။၁၃ နှစ်ရွယ် ၈ တန်းမှာ ပထမပြန် စာ မေးပွဲ အခြေပြု မူလတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အဘိဓမ္မာ ပြန့်ပွားရေး အသင်းကြီးရဲ့ (စူဠ အာဘိဓမ္မိက ဝိသိဋ္ဌ ကလျာဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို ရ ရှိခဲ့ပါတယ်။၁၄နှစ်အရွယ် နဝမတန်းမှာ အစိုးရအဘိဓမ္မာ ဂုဏ်ထူးဆောင် (ဋီကာကျော်) ၃ဆင့်ကို အောင်မြင်ကာ (မဇ္ဈိမ အာဘိဓမ္မိက ကလျာ ဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို ထပ်မံ ရရှိပြန်ပါတယ် တက္က သိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုရမဲ့ အခုနှစ်မှာလည်း လုံးဝရပ်နားခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက် ကြိုးစားပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက် (မဟာ အာဘိဓမ္မိက ဥက္ကဋ္ဌ ကလျာ ဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကို အပြီးသတ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကျမ်းတွေဆိုတာ တစ်ကျမ်း တစ်ကျမ်းကိုပဲ အောင်မြင်အောင် မနည်းလေ့လာ ပူဇော်ရကြောင်း ပူဇော်ဖူးသူတိုင်း ကောင်းစွာ သိရှိကြပါတယ်။ဒီ၅နှစ်တွ င်းမှာ အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး) ၃ဆင့် အဘိဓမ္မာ(ဂုဏ် ထူးဆောင်) ၃ဆင့်၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ၃ဆင့်၊ အခြေပြုမူလတန်းနဲ့ စာတော်ပြန်ပွဲ ၁၅ကျမ်းတို့ကို ဖြေဆို အောင်မြင်ကာ (စူဠ အာဘိဓမ္မိက ကလျာဏဉာဏဓဇ) (မဇ္ဈိမ အာဘိဓမ္မိက ဝိသိဋ္ဌ ကလျာ ဏဉာဏဓဇ)၊ (မဟာ အာဘိဓမ္မိက ဥက္ကဌ က လျာဏဉာဏဓဇ) ဘွဲ့ကြီး ၃ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ သမိုင်းတလျောက် အသက်အငယ်ဆုံး စာပြန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါမို့ ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီလောက်လုပ်နိုင်တာကို အတော်ပဲ လက်ဖျားခါမိပါတယ်။ ဒါမို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့… မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ကို ဓမ္မရသနောက် တစ်ကောက် ကောက် လိုက်ခဲ့သူ၊ ဆင်ခြေ ဆင်လက် တွေကို မထီမဲ့မြင် ပြုနိုင်တဲ့သူ အခက်ခဲတွေကို အခွင့်အရေး အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သူ၊ အားကျ အတုယူသင့်သူဂုဏ်ပြု ချီးကျူးမှုတွေနဲ့ အထူးကို ထိုက်တန်တဲ့ သူအဖြစ် နှစ်ဆန်း အမှတ်တရ ဝိသေသပြု မှတ် တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု လိုက်ရပါ တော့တယ်။
၇တန်းအောင် လူငယ်လေး ဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာသူ
By JohnSmithPosted on January 20, 2021 January 20, 2021
၇ တန်းအောင်လူငယ်လေး ဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ အထိကြိုးစားခဲ့ရတာ ဆောက်လုပ်ရေးရွှေခေတ်ကို မှီပြီး ကံကောင်းဖို့ ဆိုတာ လိုအပ်ပေမယ့်အဲဒီ ကံ တစ်ခုထဲ နဲ့ ဘယ်ဖြစ်လာပါ့မလဲနော့်။
၃ ဘီး မောင်းနေရင်း လက်ဖက်ခြောက် ကုန်သည်နဲ့တွေ့လို့ အဲဒီအိမ်မှာ ဒရိုင်ဘာ လုပ်ရာကနေ အရောင်းအဝယ်ပညာ သင်ယူခဲ့တယ်။အိမ်ထောင်ကျ ကလေးရပြီး အဆင်မပြေတော့ လမ်းဘေးမှာ ဈေးရောင်းတယ်။ ၄ နှစ်လောက် ရောင်းပြီး စုဆောင်းရငွေ နဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တွေ မုန့်တွေ လက်ကားရောင်းတယ်။
နောက် ဘဏ်ကို ပိတ်ရတော့ shopping center တွေဖက်လှည့်တယ်။ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် နဲ့ အမြန်လမ်းတွေဖောက်တယ်။အဲလိုနဲ့ ခု ရွှေတောင်ဖြစ်လာသတဲ့။ ပွဲက personal branding ဆန်ပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ ၇ တန်းပဲ အောင်ပြီး အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးပညာတွေ MBA တွေ သင်ခွင့် မရပေမယ့် သူ့ဘဝအကြောင်းပြောနေရင်းသူ့ အတွေ့အကြုံက လာတဲ့ ရိုးရှင်းပြီး နားလည်ရလွယ်တဲ့ စီးပွားရေးပညာ တချို့ ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်။ဓားပြတွေရန်က အဝတ်တထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ပြေးလာရတဲ့ကံဆိုးမှုတွေနောက်မှာ လက်ဦးဆရာဖြစ်လာမယ့် အရောင်းအဝယ် သင်ယူခွင့်ရမယ့် ကံကောင်းမှု ဖြစ်လာတယ်
ဘဏ်တွေပိတ်လိုက်ရတော့ တခြားဖက်မှာ ပိုဖိလုပ်ဖြစ်တော့ ဆောက်လုပ်ရေး ရေအားလျှပ်စစ်တွေမှာ အာရုံစိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကံဆိုးမှုနောက်မှာကံကောင်းဖို့အတွက် အခွင့်အရေး ကပ်ပါလာလေ့ရှိသတဲ့။မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပေါ့လေ။သူ့ရဲ့ ခုလက်ရှိ ချမ်းသာမှုက လက်ဦးဆရာ လက်ဖက်ခြောက်ကုန်သည်ကြီး ထက်သာနေပြီးကုန်သည်ကြီး မရှိတော့ပေမယ့် သူ့မိသားစုဝင်တွေကို လေးလေးစားစားနဲ့ သူဌေးလို့ပဲခေါ်နေမိတုန်း။
တချိန်က သူမောင်းခဲ့ရတဲ့ ကုန်သည်ကြီးရဲ့ကားကို အမှတ်တရ ဝယ်ထားပြီး သိမ်းထားခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးသိတယ် ။
ကျေးဇူးပြန်ဆပ်တယ်။သူရဲ့ လက်အောက်က ဝန်ထမ်းတွေကို အရည်အချင်းအလိုက် လခတွေ နေရာတွေ ပေးခဲ့တယ်
လူတွေကို ယုံကြည်မှုထားတယ်။မယုံရင် လုံးဝမခိုင်းနဲ့။ ခိုင်းပြီဆို ယုံထားလိုက်။ သင်တန်းပေးလိုက်ပြီး ကျွမ်းကျင်လို့ သူနေရာမပေးနိုင်လို့ ထွက်သွားလည်း တခြားနေရာမှာ ထူးချွန်ရင် သူနေရာပေးနိုင်တဲ့ တချိန်ပြန်လာမှာပဲ။ပြန်မလာလည်း နိုင်ငံအတွက်အကျိုး ရှိနေမှာပဲ။
လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်။ မှားရင် ပြင်ပေးရမယ်နောက်ကိုယ့်အောင်က လူတွေကိုလည်း လေးလေးစားစား ဆက်ဆံရမယ်။တချိန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချမှုရှိရမယ်။
အဲဒါမှ ဝန်ထမ်းတွေက ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာရှိမယ်။ လူတွေက အပြန်အလှန်လေးစားမယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်မယ်ဆို line of business အရေးကြီးတယ်။
ကိုယ်လုပ်မယ့်အလုပ်က potential ဘယ်လောက်ရှိလဲ တွက်ဖို့လိုတယ်။
စီးပွားရေးရဲ့ fluctuation ကိုအမြဲလေ့လာ သိနေရမယ်။ ဈေးကွက် ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာသိရင် ကြိုပြင်ဆင်ထား။ ဈေးကွက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုစောင့်နေမှာ မဟုတ်ဖူး။မပြင်မဆင်ထားရင် ကိုယ်ကျန်ခဲ့မှာပဲ။ ရဲရဲသာလုပ်။ ကိုယ်လုပ်တာအတွက် ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်။
ကြောစိတ်မဝင်အောင် support ပေး။ ရှေ့ကနေ ခေါင်းဆောင်လုပ်။ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ကွာလတီကို ကိုယ်သတ်မှတ်။ သူများရဲ့ ၁၀၀ တန်ပစ္စည်းကို ကိုယ်က ၂၀၀ ရောင်းလို့ ကျေကျေနပ်နပ် ပေးဝယ်ရင် အဲဒါ ကွာလတီပဲ။အဲလိုရဖို့ SOP တွေ work flow တွေ သေချာဆွဲထား။
အောင်မြင်မှုရလာရင် ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကြိုးစား။အောင်ပွဲခံပြီး သာယာမနေနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချဲလင့် ခေါ်နိုင်ဖို့ ချဲလင့်အတိုင်း ကြိုးစားဖို့ ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ အမြဲသင်ယူဖို့ အသင့်ဖြစ်နေရမယ်။ဘာသာစကားတွေ သင်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစား။ အင်္ဂလိပ်စာ တရုတ်စာ အဓိကထားသင်။
တခြားဘာသာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ထမင်းစားရေသောက် နည်းနည်းပါးပါး နားလည်အောင်ကြိုးစား။စကားပြောဖို့ မပီမှာ မှားမှာမကြောက်ပဲ ရဲရဲသာပြောပါ။
လုပ်ငန်းအတွက် အတိအကျ လိုအပ်ရင် စကားပြန် သုံးပေမယ့် ဒင်နာတွေ ဆိုရှယ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပြော။အောင်မြင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပေမယ့် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေအမြဲစဉ်းစားထားပြီး ပြင်ဆင်ထားရမယ်။နောက်ဆုံး စကား လက်ဆောင်ကတော့ အမြဲ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ထားပြီး ကောင်းတာတွေ့ရင်ယူ
အများယုံကြည်မှုရအောင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက် ပြင်ဆင်ထားပါ။ဒီလို ပြင်ဆင်ကြိုးစားရင်း ဆုံးရှုံးမှုတွေ။
ရှုံးနိမ့်မှုတွေ ကြုံလာတိုင်း ဒါတွေက ခဏတာ ယာယီပါလို့ နှလုံးသွင်းရင်း
ဘဝကိုပျော်ပျော် ရွင်ရွင် ဖြတ်သန်းပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ့်ဆီရောက်လာမှာ အသေအချာပါ။
တချိန်ကမင့်ကိုဆေးထည့်ပေးဖူးတဲ့အဘွားကြီးပါကွာ အခုမင်းဆွဲကြိုး ရိုက်လုလို့ ဒဏ်ရာနဲ့ နုတ်ဆက်… မေတခု သားတခု ရှိတဲ့ ဘဝလေးကိုမှ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ (ဆွဲကြိုး အလုခံရတဲ့ အမေကြီး ကွယ်လွန်ရှာပြီ)၁၆.၁.၂၀၂၁(စနေနေ့) ၁၇.၁.၂၀၂၁(တနင်္ဂနွေနေ့) ရုံးပိတ်ရက် နှစ်ရက်ဟာ အိပ်မက်ဆိုး တစ်ပုဒ်လို ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။
တကယ်တမ်း အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရင် အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ။ ၁၅.၁.၂၀၂၁(သောကြာနေ့) ညနေကအမေ ရေချိုးခန်းရှေ့ ချော်လဲတယ် ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ အစ ပြုခဲ့ပါတယ်။ရုံး ကနေ အမြန် ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူ အမေ အဲဒီကတည်းက ဘာစကားမှ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။
တရားခံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂/၃လ လောက်က အိမ်ပြင်လို့ လက်သမားခေါ်တဲ့ အထဲမှာ ပါလာခဲ့တဲ့လက်သမားအကူ ကောင်လေးပါ။ ၁၀ သိန်းလောက် တန်တဲ့ ဆွဲကြိုး တစ်ကုံးအတွက်နဲ့ ကျနော့်အမေကို ရက်ရက် စက်စက် တမလွန်ပို့သွားခဲ့တယ် ဗျာ။ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ အိမ်ထဲခိုးဝင်၊ရေချိုးခန်းကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့ အမေ့ကို ပေါက်ဆိန်ရိုး သစ်သားတုတ်နဲ့ ၂/၃ ချက် ဆင့်ရိုက်သတဲ့။မှောက်လဲသွားမှ ဆွဲကြိုး ကို ဖြုတ်ယူပြီး အိမ်ရှေ့ ပြတွင်းပေါက် ကနေ ခုန်ထွက် ပြေးသွားသတဲ့။
လုပ်ရက်ပါ့ကွာ။မင်း အိမ်မှာ လက်သမားလုပ်ရင်း လက်ကို စက်လွှထိ ခဲ့တုန်းက ဆေးထည့်ပြီးပတ်တီး စည်းပေးခဲ့တဲ့ အဘွားကြီး ပါကွာ။မင်းတို့ နေ့လယ် ထမင်းစား ပြန်တိုင်း ဟင်း ထုပ်လေးတွေထည့်ပေးနေကျ အဘွားကြီး ပါကွာ။
မင်းတို့ အတွက် မိုးလင်းတာနဲ့ ရေနွေးအိုး တည်ပြီးသောက်ရေခွက်လေးတွေကို ပြောင် အောင် တိုက်ပေးထားတဲ့ အသက် ၇၆ အရွယ် အဘွားအိုကြီးပါကွာ။မင်း တို့ တောင်းတဲ့ ဈေးထက် အမေ မသိအောင် ငါ ပိုပေးခဲ့တယ်လေ။မင်း တို့ အတွက် ဆေးလိပ်၊ကွမ်းယာ၊… လက်ဖက်ရည် ၊ အအေး လိုလေသေး မရှိ ငါ စီစဉ် ပေးခဲ့တယ်လေ။ ငါ ပြောတာ ဟုတ်၊မဟုတ် မင်း ရဲ့လက် သမား ခေါင်းဆောင် မသေသေးပါဘူးကွာ။ငါ မေး ပြပါ့မယ်။အခု တော့ကွာ။တွန်းလှဲပြီး လု ပြေးရင်တောင် မင်း မှန်း မသိနိုင်မယ့် မင်း နောက် မလိုက်နိုင်မယ့်..
အဘွားကြီးကို ဆွဲကြိုး တစ်ကုံးအတွက် မသေမချင်း ရိုက်ခဲ့တယ်တဲ့လား။ အမေတစ်ခု သား တစ်ခု ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် နေလာပြီးမှ ၃ ရက်အတွင်း အမေက ခပ်မြန်မြန်ပဲ ကျနော့် ကို ထားသွားခဲ့တယ်။သူ့ ကို ဘာလုပ်ချင်လဲ မေးရင် ကျနော် ပြန် လက်စားချေချင်ပါတယ်။ ကျနော် ပုတုဇဉ် မို့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါဘူး။ကျနော် တကယ် ပြန်လက်စားချေချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ ပြုသူအသစ်မို့ ဘာသာရေး အဆုံးအမ အရ တရားဥပဒေရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကိုပဲ သူ ခံ ပါစေ။ကျနော် အသစ် ပြန်မဖြစ်ချင် တော့ပါ။ကျနော့် အမေလည်း ဒီ ဘဝ ဟာ
နောက်ဆုံး ဖြစ်ပါစေ။ ကံကြွေးများရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီဘဝ ကျေပါစေ ။ အမေ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ။